HORDHAC : liverpool VS Chelsea? Miyey Chelse mar kale ciil kaambo iyo cuqdad ay ku beeri kartaa Reds? iyada oo la ogaa in ay jalaafo u dhigeen iyaga oo ku haminaya hanashada horyaalka – Gool FM
( England) 14-Abriil 2019 Kooxda Liverpool ayaa kulan micno weyn ugu fadhiya ku marti qaadi doonta tiyaatarkeeda weyn ee Anfield kooxda Chelse oo dhankooda beegsi ugu jira kaalmaha afarta sare ee loogu soo boxo tartanka dhago weyne.
Macalin Klop iyo xertiisa ayey kulankan ka go’antahay in ay helaan sedexda dhibcood si uusan uquusin markabkooda oo doonaya in uu ku xirto kaalinta koowaad ee horyaalka blase Kooxda Bules ayaa xood xoodasho iyo xoog isagu geen doonta sidii ay ku sal dhigan lahaayeen kaalmaha afarta sare ee horyaalka.
Waxa uu ahaa doonaa kulan 90-daqiiqo oo kabta la isla gishan doona, garsoorkuna uu abahnaan doono biyo cabaal badan waxaana meesha ka marneen calan sidayaasha oo laga dareemi doono xuurto badan madaama kukanka uu go’amin doono wax badan.
Miyey Chelsea mar kale ciil kaambo iyo cuqdad ay ku beeri kartaa Reds? iyada oo la ogaa in ay jalaafo u dhigeen iyaga oo ku haminaya irada laga galo halka uu yaalo koobka Premier League balse ciyaartoyda haatan ee Liverpool ayaa is garab dhigaya naftooda si dib mar kale aysan ugu soo laaban uur kutaaladii barigii hore oo ay ilaa iyo hadda aysan ka bogsoon.
Dambeedka daafca bidix ee Andy Robertson ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiis kaddib markii uu ganaax ku seegay kulankii Champions League ee ay guusha ka gaareen Porto .
Joe Gomez ayaa diyaar ah, waxaana loo magacaabay kursiga keydka bartamihii isbuuca, halka Adam Lallana uu qarka u saaran yahay inuu ciyaaro inkastoo uu dhawac soo gaaray.
Chelsea ayaa todobo isbedel ku sameysay safkooda joogtada ah kulankii Europa League ee ay la ciyaareen Slavia Prague, waxaana ay dib ugu yeeri doonaan ciyaartoy dhowr ah oo muhiim ah sida Eden Hazard.
Kooxda Blues ayaa qiimeyn doonta xaalada caafimaad ee daafaca bidix Emerson, oo seegay kulankii Khamiistii.
Callum Hudson-Odoi ayaa laga saaray ciyaartoyda kulankii Europe League sababo daaal badan uu dareemayo xidiga , macalinka kooxda Maurizio Sarri ayaan wali go’aansan xidiga uu u wakiishan doono garabka bidix.
Kulanka: liverpool VS Chelsea? ( Premier League)
Goorta: 6:30 oo Fiidnimo
Garsoorka: Michael Oliver
Naadiga Liverpool ayaa guul la’aan ah shantii kulan ee la soo dhaafay oo ay wajahday Kooxda Chelsea kulmada horyaalka iyo tartanada kale ee laga ciyaaro gudaha Englad ( 3-bareejo iyo 2-qasaaro) ayey kala soo kulantay.
Kooxda lagu naaneeso The Blues ayaa guul daro la’an ah 8-kulan oo ay ku ciyaartay garoonka Anfield dhamaan tartamada tan iyo guul daradii 4-1 oo dhacday bishii May 2012 wixii markaa ka dambeyey Chelse ayaa garoonka Anfield kala soo laabtay ( 3-guul iyo 5-bareejo).
The Reds ayaa guul daro la’aan ah 17-kii kulan ee la soo dhaafay ee Premier League oo ay garoonkeeda ku marti qaaday kooxaha lixda ee ugu sareeya horyaalka 9-ka mid ah wee ay badiyeen hlka 8-kulan ay bar-baro galeen.
Chelsea ayaa la kulmeysay guul daro shantii kulan ee ugu dambeyey ee ay booqato kooxaha lixda ee ugu sareeya horyaalka waxaana wadar shantaa kulan looga dhaliyey 14-gool.
Kooxda reer Merseysiders ayaa dhalisay 21 – gool oo Premier League 15-ka daqiiqo ee ugu dambeeya ee ciyaarta xili ciyaareedkan, waana Kooxda ugu badan ee sidaa sameeysa marka laga soo tago Chelse oo 19-gool ku dhalisay 15-ka daqiiqo ee ugu dambeeya ciyaarta.
Safafka Macqulka ah ee labada dhic ay la soo shir tagi karaan :